Dib u eegista Marti-gelinta Websaydhka: Dib u eegidda Waxqabadka Marti-gelinta ee ugu dambeysay & Xulo
Raadi Shabakada ugu fiican
Dib-u-eegisyada martigelinta ah ee la dhisay
cilmi baaris madaxbannaan & macluumaad adag.
Xulashooyinka Martigelinta Websaydhka ee ugu Fiican
Isbarbardhig & Dooro
Adeegyada ugu wanaagsan ee Emailka Adeegyada
Raadinta Shabakada Wanaagsan ee ugu Fiican
Ugu Fiican Marti-gelinta Websaydhka ee aan xadidanayn
Qodobbada ugu fiican ee la isku maamulo WordPress
Bixiyeyaasha ugu fiican ee VPS Hosting
Ganacsiga yaryar ee ugu fiican
A2 HostingHawlgallada la wadaago waxay ka bilaabmaan $ 3.92 / mo.
BlueHostHawlgallada la wadaago waxay ka bilaabmaan $ 2.95 / mo.
GreenGeeksMartigalinta dimoqraadiyadeed ayaa bilaabmaysa $ 2.95 / mo.
HostgatorMartigelinta barashada waxay ka bilaabataa $ 4.95 / mo.
Soo dhaweyntaHawlgallada la wadaago waxay ka bilaabmaan $ 0.80 / mo.
HostPapaHoyga Canadianka wuxuu ka bilaabmaa $ 3.95 / mo.
Views Dhammaan Faallooyinka Martida loo yahay
InMotion HostingHawlgallada la wadaago waxay ka bilaabmaan $ 3.99 / mo.
InterServerLa wadaagayo martigelinta $ 5 / mo ee nolosha.
Iskuduwaha BarashadaMartigalinta SPanel VPS waxay bilaabataa $ 13.95 / mo.
SiteGroundHawlgallada la wadaago waxay ka bilaabmaan $ 3.95 / mo.
TMDHostingHawlgallada la wadaago waxay ka bilaabmaan $ 2.95 / mo.
WP MotorMaamulida WP ee lagu marti gelinayo $ 29 / mo.
Asaasiga Shabakada Guud Sidee web hosting iyo magaca domain shaqeeyaa.
Martigaliya Websaydh Laba dariiqo oo lagu marti-galiyo degel shaqeynaya.
Xullo Marti Gel Liiska 16-ka liis ee liiska macaamiisha martigeliya.
Baro Setup SSL Isbarbar dhig oo ka iibso SSL qiimo jaban CA ka aaminay
Bilow Blog Tilmaame talaabo-bilow ah oo lagu bilaabayo blog.
Grow Your Blog 15 siyaabood oo kor loogu qaado oo lagu kobciyo balooggaaga.
Tusaha Hagidda VPS Sidee VPS u shaqeysaa? Goorma ayaa la beddelayaa?
Bedelka Horyaalka Webka Sida loo wareejiyo website-yadaada aqal cusub.
Kharashka Webka Imisa ayaad ku bixineysaa khadka internetka?
Sameyso Website Saddex siyaabood oo sahlan oo loo abuuro degelkaaga.
Sidee VPN u shaqeysaa Sidee VPN u shaqeeyaa oo ma u baahan tahay hal mid?
Raadi VPN ugu Fiican Sida loo doorto iyo halka laga iibsado VPN?
WHSR Web Host HostKuu muuji infra iyo teknolojiyadda wixii ka dambeeya degel kasta.
WHSR Baaritaanka UptimeSi degdeg ah u hubi haddii websaydhku hoos u dhaco.
Isbarbar-dhigga Webka Isbarbardhig halbeegyada webka 3 markiiba.
Home » Dib-u-eegista martida
WHSR Dib u eegista Bogagga Websaydhka
By Jerry Low & Kooxda WHSR
La soo saaray: May 07, 2020
60+ Dib u eegista Bogagga Websaydhka & Xaqiiqada Degdega ah
Waxaa jira lix arimood oo waaweyn oo aan eegno marka aan qiimeyneyno martigeliyaha shabakadda: Waxqabadka Server, astaamaha lagama maarmaanka u ah, taageerada macaamiisha, saaxiibtinimada isticmaale, sumcadda shirkadda iyo soo celinta xaqiijinta isticmaalaha, iyo sidoo kale qiimaha. Waxaan diyaarinaa goobo tijaabo ah shirkadaha shirkadaha martigaliya annagana waxaan u isticmaalnaa liis-hubinta 80-dhibic si aan u qiimeyno tayada adeegga marti-gelinta. Waxaad ka baran kartaa waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan sida aan u qiimeyno marti-geliyaha websaydhka halkan.
Daruuraha 25 GB 1 TB Gudaha $ 10 / mo - WHSR10
20i 10GB 50GB WordPress $ £ 4.58 / mo 30 maalmood -
WPWebHost 30 GB Unlimited qulqulka $ 9.00 / mo 100 Days APRILDEAL50
1 & 1 Hosting Unlimited Unlimited caadadii $ 4.99 / mo 30 Days -
Kinsta 10 GB Booqashada 20,000 WordPress $ 25 / mo 30 maalmood -
MightWeb 10GB Unlimited cpanel $ 4.95 / mo 30 maalmood -
FastComet 15 GB SSD Unlimited cpanel $ 2.95 / mo 45 maalmood -
ResellerClub Hosting Unlimited Unlimited cpanel $ 2.39 / mo 30 Days HESHIISKA
LiquidWeb 50 GB SSD 5 TB caadadii $ 66.33 / mo - WordPress33
Soo dhaweynta Unlimited Unlimited cpanel $ 3.99 / mo 30 Days Isku-xirka
FastWebHost 20 GB Unlimited cpanel $ 2.95 / mo 30 Days Hawlgalka xawaaraha
ScalaHosting Unlimited Unlimited caadadii $ 6.95 / mo 30 Days -
WP Motor 10 GB 50 GB WordPress $ 22.50 / mo 60 Days WPE3Free
SiteGround 20 GB Unlimited caadadii $ 14.99 / mo 30 Days Kicin Link - Isticmaalayaasha cusub promo
Dadka 5 GB 10 GB cpanel $ 8 / mo 60 Days -
Xogta ugu fiican - - WordPress - - -
Xalalka Nabadgelyada 300 GB - cpanel $ 9.96 / mo 30 Days -
Diiwaanka Miss Unlimited Unlimited cpanel $ 8.31 / mo 45 Days -
Macbadka Warbaahinta 20 GB 1 TB qulqulka $ 15.83 / mo 30 Days -
LunarPages Unlimited Unlimited caadadii $ 6.95 / mo 30 Days -
Wareegaan yar yar 5 GB 50 GB cpanel $ 6.67 / mo 30 Days -
IX Web Hosting - - - $ 2.95 / mo 30 Days (Isku-xirka)
iPage Unlimited Unlimited vdeck $ 2.49 / mo 30 Days (Isku-xirka)
InMotion Hosting Unlimited Unlimited cpanel $ 5.99 / mo 90 Days (Isku-xirka)
Hostgator Unlimited Lama bedelin cpanel $ 8.95 / mo 45 Days WHSRBUILD
Midabka Aqalka 10 GB 1000 GB cpanel $ 9.30 / mo 5 Days NEWVPS
GreenGeeks Unlimited Unlimited cpanel $ 3.95 / mo 30 Days (Isku-xirka)
GoDaddy Unlimited Unlimited cpanel $ 9.39 / mo 30 Days (Ficil iskuxirid)
Fatuuro Unlimited Unlimited vdeck $ 4.08 / mo 30 Days -
DreamHost Unlimited Unlimited caadadii $ 8.95 / mo 97 Days WHSR25
Dot5 Hosting Unlimited Unlimited vdeck $ 5.95 / mo 30 maalmood -
Paradigm Crucial 30 GB Unlimited cpanel $ 10 / mo - -
BlueHost 50 GB Unlimited cpanel $ 3.95 / mo 30 Days (Isku-xirka)
* Haysashada Siideynta: WHSR waxay magdhow ka heshaa waxa ku jira boggayaga internetka. Lacag ayaa nala siiyaa markii isticmaaleyaasheena ay wax iibsadaan iyagoo adeegsanaya xiriiriyaasheena gudbinta.
Sidee loo Doortaa Hogaanka Tooska ah?
Sideen u go'aansan karnaa haddii marti-geliyaha websaydhadu fiican yahay? Muuqaal ballac iyo baakad disk ma wali maalmahan ayey leeyihiin? Noocee ah adeegga martigelinta ee ay tahay inaad raacdo?
Ii caawi inaan ogaado jawaabaha su'aalahan iyo inbadan. Waxaan kugu hagi doonaa jidka adiga oo leh waddo dhammaystiran si loo hubiyo in dhammaan waxa aad ogtahay sida saxda ah ee loo xusho martigelinta saxda ah ee webka.
Liiska Warbixinta Kormeeraha Guud ee Website
Waxaa jira arrimo fara badan oo ku lug leh dib-u-eegista iyo xulashada marti-geliyaha websaydhka - oo laga yaabo inay ka buuqdo inta badan dadka. Halkan waxaa ah 16 qodob oo ay tahay inaad ka gudubto kahor intaadan dooran martiyahaaga cusub ee shabakadda
Ogow baahidaada martigelinta
Hubi sugnaanshaha server iyo dammaanadda wakhtiga koritaanka
Xulashooyinka casriyeynta ee xayeysiinta
Lambarrada domain addon
Qiimaha saxeexa qiimaha cusbooneysiinta
Siyaasadda dib u celinta iyo mudada tijaabada ee lacag la'aanta ah
Noocyada muhiimka ah ee martigelinta
sifooyinka e-ganacsiga iyo taageerada
Email martigelinta ([Email ilaaliyo])
Ku sheekeysta sheeko / taageero telefoon
Jawaab celinta Server
1. Ogow Aqbalaaddaada
Marna ma heli kartid hoyga internetka ee saxda ah adiga oon ogayn waxaad u baahan tahay. Sidaa ka hor intaanad tegin - wax waliba gooni u dhig (oo ay ku jiraan tilmaamahan aad akhrido) oo ka feker waxaad u baahan tahay.
Miyaad rabtaa wax caadi ah (blog WordPress, laga yaabee)?
Miyaad ubaahan tahay taageerada qoraalka gaarka ah (tus. PHP)?
Intee in le'eg (ama yaryar) mareegtaada mareegahaagu ma tagi karaan?
Kuwani waa qaar ka mid ah su'aalaha asaasiga ah ee aad u baahan tahay inaad ka jawaabto naftaada.
Sawir maskaxdaada waxa aad rabto in aad website-kaaga hadda noqotid, ka dibna ku dhiso fikradda illaa aad ka tirsantahay 12 bilooyin ka hor. Ha u fiirsan waxa aad rabto inaad bixiso, laakiin sidoo kale waxa laga yaabo inay rabaan ama u baahan yihiin.
Tani waxay ugu dambeyntii hoos udhigi kartaa hal xaqiiqo sahlan. Intee in le'eg dhaqaale ayaa website-kaagu u baahan yahay? Haddii aad u socoto blog shakhsiyeed ama bog yar oo dhexdhexaad ah, maahan in aad u baahan tahay awood dheeraad ah ee VPS martigelin.
Haddii aad adeegsanayso adeeg ganacsi oo weyn ama hawlo badan oo eCommerce ah, markaa VPS ama server u gooni ah ayaa laga yaabaa in loo baahdo si loo maareeyo mugga weyn ee gaadiidka iyo sidoo kale kalsooni dheeraad ah.
Dhammaadka maalinta, doorasho kastaa waxay leedahay heerkeeda iyo qiimaha gaarka ah, xitaa ka mid ah labada qaybood ee webka martigelinta ee aan halkan ku sharaxay. Digniintu waxay u baahan tahay in la bixiyo si faahfaahsan oo loo waafaqsan yahay shuruudaha shabakadaada.
Haddii aad gebi ahaanba cusub tahay ...
Newbies, xeerka fudud wuxuu bilaabi karaa yar oo leh xisaab xiran oo wanaagsan.
Koontada martigelinta ee la wadaago waa mid raqiis ah, sahlan oo lagu hayo, iyo ku filan badi goobaha cusub. Waxay sidoo kale kuu ogolaaneysaa inaad diirada saarto dhismahaaga adiga oo aanad ka walwalsanayn hawlaha kale ee server-yada ah sida dayactirka database iyo amniga.
Alos, sababtoo ah qorshaha martigelintu waa maalmo la awoodi karo, waxaa fiican in la bilaabo yaryar oo ka shaqee sida aad gaadiidkaaga u kordho. Waxay noqon doontaa kharash badan oo wax ku ool ah oo u oggolow xirfadahaaga maareynta inaad si dabiiciyan u korodho taraafikadaada internetka.
2. Cabirka Server / Dhibcaha Uptimmo
Ma jiraan wax ka muhiimsan oo ah helitaanka 24 × 7 websaydh oo shaqeynaya, ka dib oo dhan, soo booqdayaashaadu waxay imaan karaan goobtaada waqtiyo waqti ah adduunka oo dhan. Waxaad ubaahantahay martigaliye degenaansho oo xasilloon, labadaba marka loo eego adeegyadooda iyo sidoo kale xiriirada shabakada. 99.95% waxaa loo arkaa inay caadi tahay maalmahan, xitaa xisaabaadka martigelinta la wadaago; wax kastoo ka hooseeya 99% lama aqbali karo. Xisaabaadka joogtada ah badanaa waxay ku faanaan 99.99% ama waqti ka wanaagsan.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo kala duwan oo lagu heli karo macluumaadka martigelinta wakhtiga firaaqada. Habka ugu fudud ee la sameeyo waa sidatan akhrinta dib u eegista martigelinta - halkaas oo aan ku soo daabacno diiwaanka wakhtiga wakhtiga ka dambeeya (fiiri shayaalka hoose).
Haddii kale, waxaad si fudud ula socon kartaa martigeliyahaaga internetka qalabka kormeerista ee server - Qaar badan oo ka mid ah qalabkaan ayaa loo heli karaa mid bilaash ah, ama ugu yaraan waxay bixiyaan mudo tijaabo ah. Waxay yihiin kuwo waxtarka leh oo aad u fudud in la isticmaalo.
Tusaalooyin: Tusaalooyin aan caadi ahayn oo lagu daabacay WHSR
Waxaan xooga saareynaa waqtiga inbadan ee dib u eegistayada martigelinta, hoos waxaa ku qoran diiwaanno hore oo aan soo aruurinay iyadoo la adeegsanayo Uptime Robot. Waxaan sidoo kale bilownay HostScore (aalad qalab raadin toos ah) gadaal bishii Sebtember 2019, Waxaan u soo jeedinayaa kuwa doonaya rikoorada waqtiga saxda ah inay iska baaraan.
Diiwaanka Waqti-xaadirka ah ee goobta (Src: Dib u eegista Bogga SiteGround)
Diiwaanka waqtiga ee InMotion Hosting (Src: Dib u eegida InMotion)
3. Xulashada Hagaajinta Server
Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah adeegaha martigelinta ee laga heli karo suuqa: Wadaagga, VPS, u go'ay, iyo marti-gelinta daruurta.
Marti gelinta la wadaago ayaa inta badan ah xulashada ugu fiican bilawga, boggaga internetka, iyo milkiilayaasha websaydhada shakhsiyadeed maadaama ay tahay qaabka ugu jaban ee marti-gelinta websaydhada, oo ku kacda qiyaastii $ 5 - $ 10 bishii.
Qorshayaasha martigelinta ee la wadaago, waxaad la wadaagi doontaa kaydkaaga server-ka isticmaaleyaasha kale, taas oo macnaheedu yahay inaad waxyar ka bixisid martigelinta maadaama qiimaha ay ku wadaagayaan adeegsadayaasha kale.
Yaa u tagaa martiqaad la wadaago?
Guud ahaan, haddii aad kayar tahay booqdayaasha 5,000 bil kasta, markaa waxaa fiican inaad u socoto martigalinta la wadaago. Marka websaydhkaagu sii weynaado oo aad hesho soo booqdeyaal badan, waxaad ubaahnaan kartaa inaad u guurto server ka awood badan.
Wadaagis La Isugu Yeelanayo: Sharaf leh, fududahay in lagu hayo; xakamaynta xakamaynta sunta iyo awoodda.
A Xafiiska Adeegga Gaarka ah ee VPS (VPS) waxay la mid tahay martigelinta la wadaago ee waxay wadaagaan hal server jir ah. Farqiga ayaa ah inaad haysato ilaha kuu gaar ah oo ka duwan kuwa isticmaala kale.
Marti gelinta VPS, asal ahaan waa talaabo ka soo kacaysa marti galinta la wadaago marka loo eego awooda iyo xawaaraha laakiin wali way ka jaban tahay helitaanka adeegaaga gaarka kuu ah. Waxay kuxirantahay CPU iyo xusuusta (RAM) ee aad hesho, martigalinta VPS waxay ku kici kartaa meelkasta oo udhaxeysa $ 50 ilaa $ 200 bishii.
VPS Hosting: Xakameyn badan oo server ah iyo awood; pricier badan martigelinta la wadaago.
Martigalinta barafku wuxuu isku daraa boqollaal shaqsi ah oo isku-dhafan si ay u shaqeeyaan mid ka mid ah server weyn. Fikradda mawaadiicda martigelinta ee daruuriga ah waa inaad si sahlan kor ugu qaadi kartid una cusbooneysiin kartid baahidaada adeeggaaga marka loo baahdo.
Tusaale ahaan, haddii aad si lama filaan ah ula kulanto tiro aad u badan oo ah taraafikada webka, ma aha inaad ka walwasho in la xiro maadaama shirkadda martigelinta ay si fudud u qabsan karto qulqulka taraafikada adoo kusii kordhinaya ilo badan oo server ah.
Qiimaha daroogada marti gelinta waxay u egtahay in ay kala duwan tahay sida ay caadi ahaan u isticmaalaan qaab-lacag-u--ah-qaab-isticmaalka qiimaha.
Soodinta Xayeysiinta: Si aad ah u jilicsan oo kharashkana loo qiimeeyo; xargaha barashada si ay u bilaabaan.
Martigelinta qarsoodiga ah
Marti-gelinta server-ka loo qoondeeyay waa markaad leedahay shabakad jimicsi oo dhan oo u heellan shabakaddaada. Kaliya maahan inaad si buuxda gacanta ugu hayso ilahaaga server, laakiin sidoo kale maaha inaad ka walwasho websaydhyada kale ee kheyraadkaaga ka dhigaya ama hoos u dhigaya websaydhkaaga.
Wixii website-yo ah oo ka weyn oo ay leeyihiin joogitaan weyn, adeegsadeyaal gaar ah ayaa guud ahaan lagu talinayaa si loo xakameeyo tirada badan ee gaadiidka. Qiimaha server-ka qaaska ah ayaa si weyn uga sarreeya martigelinta iyo inaad filan karto inaad ka bixiso $ 100 iyo in ka badan bishiiba.
Xayeysiinta La Qaadey: Awooda Sarrifka weyn iyo kantaroolka buuxa ee server; waxay ubaahantahay kharashka iyo xirfadaha ugu sareeya.
Talooyin faa'iido leh:
Marti-gelinta websaydhka wadaagga ahi way awood badan yihiin oo caadiyan ku filan adeegsadayaasha cusub. Haddii aad filayso in websaydhku inuu si dhakhso leh u kobco markaa ka fiirso inaad soo qaadatid a gaarka loo leeyahay (VPS) ama server heersare ah loogu talagaley awood korodhsiinta, awoodda xasuusta, kaydinta diskka, iyo xataa xitaa xoojinta amniga.
Shirkadaha martigelinta sumcad leh ee bixiya dhammaan afarta ikhtiyaar ee martigelinta (Wadaagga / VPS / Balanqaad / Cloud) waxaa ka mid ah: A2 Hosting, InMotion Hosting, Iyo SiteGround.
4. Domains Addon Multiple
Magacyada Domain waa raqiis - sidaas runtii waa runtii in badanaa waa adag tahay in laga hortago in aan laheyn wax ka badan hal.
Aniga shaqsi ahaan waxaan leeyahay in kabadan 50 magac oo magac ah magacyadayda GoDaddy iyo NameCheap - kaligana ma ihi. Sida laga soo xigtay sahaminta Webkani - 80% codbixiyayaasha ayaa leh wax ka badan 5 domains iyo in ka badan 20% codbixiyeyaashu waxay leeyihiin wax ka badan 50!
Si loo helo meelahan dheeraadka ah, waxaan u baahannahay boos bannaan oo dheeraad ah. Tani waa sababta ay muhiim u tahay in lagu yeesho koontada martigelinta ee internetka oo u ogolaato in lagu daro tiro badan.
Raadi martigaliyaha webka leh wax ka badan 50 addon domain
Guud ahaan, shirkadaha marti geliya miisaaniyadda intooda badan waxay u oggol yihiin ugu yaraan 25 addon domains * hal keli kaste, laakiin weligaa waad hubin kartaa. Sannado ka hor waxaan ahaa taxadar la'aan oo aan u saxiixay martigeliye webka oo u oggolaanaya hal domain kaliya. Nasiib darro, waxaan hayn jiray wax ka badan 10 meelaha xayeysiiska ah. Ha ku celin qaladkeyga - hubi awooda domain ka hor intaadan iibsan.
Talooyin faa'iido leh: Addon Domain = website gooni ah oo leh shabakad kale oo aad ku martigelin karto martigeliyaha webka; Parked Domain = domain dheeraad ah oo aad "park" ah gudbinta domain ama email martigelinta.
5. Saxiixa Nidaamka Cusboonaysiinta
Heshiisyo wax ku ool ah, gaar ahaan martigelinta la wadaago, inta badan waa raqiis inta lagu jiro saxiixista. La soco inkastoo ay taasi badanaa ku dhacdo qiimaha cusbooneysiinta oo aad u sarreeya, markaa iska ilaali ka hor intaadan gujin 'iibsasho' qorshahaas kaas oo ku siinaya qiimo saxeexan qiimaha 80%!
Tani waa caadada warshadaha.
Haddii aadan diyaar u ahayn in aad udhowdid laba ama saddex bog oo marti-gelin ah labadii sanaba mar, ma jirto hab looga badbaado kharashka cusbooneysiinta.
Dib-u-eegistayada martigeliyahayaga, waxaan ka jareynaa dhibanaha martigeliyaasha kor u qaada qiimaha ay ka leeyihiin 50% cusboonaysiinta. Laakiin guud ahaan waan ku fiicanahay shirkadaha dib u cusbooneysiiya wax ka hooseeya 100% qiimaha boodhka ah - macnaha, haddii aad iska diiwaangeliso shirkad $ 5 / mo ah, khidmadaha cusboonaysiinta waa inaysan ka badan $ 10 / mo.
Si looga fogaado wax kasta oo aan fiicneyn, hubi Tilmaamaha si aad u hubiso in aad ku habboon tahay heerarka cusboonaysiinta ka hor inta aadan saxiixin.
Talooyin faa'iido leh: Mid ka mid ah habka ugu dhaqsiyaha badan ee loo sameyn karo waa inaad gujiso shirkadda ToS ee shirkadda martigelisa (sida caadiga ah ee bogga hoose), riix Ctrl + F, oo raadi erayga "cusbooneysiin" ama "cusbooneysiin".
Isbarbardhig: Saxiixa iyo qiimaha cusbooneysiinta
Ogsoonow in badanaa martigelinta shirkadaha soo jiidashada qiimaha ay ku qoran yihiin kuwa ay yihiin kuwa jack-kor u kacaya qiimaha ugu badan.
A2 Hosting $ 3.92 / mo $ 7.99 / mo + 100% Booqo Online
AltusHost € 4.95 / mo € 4.95 / mo Isbedel la'aan Booqo Online
DreamHost $ 9.95 / mo $ 9.95 / mo Isbedel la'aan Booqo Online
Hostgator $ 8.95 / mo $ 13.95 / mo + 56% Booqo Online
HostPapa $ 3.36 / mo $ 7.99 / mo + 110% Booqo Online
InMotion $ 3.99 / mo $ 7.99 / mo + 100% Booqo Online
InterServer $ 5.00 / mo $ 5.00 / mo Isbedel la'aan Booqo Online
iPage $ 1.99 / mo $ 7.99 / mo + 300% Booqo Online
LiquidWeb $ 69 / mo $ 69 / mo Isbedel la'aan Booqo Online
Pressidium $ 42 / mo $ 42 / mo Isbedel la'aan Booqo Online
WP Motor $ 29 / mo $ 29 / mo Isbedel la'aan Booqo Online
* Xusuusin: Qiimaha hostPapa iyo InMotion Hosting ayaa ku saleysan qandaraasyada gaarka loo leeyahay ee WHSR. Dhammaan qiimayaasha waxaa la hubiyaa inay sax yihiin Janaayo 2019.
6. Siyaasadda Dib-u-Celinta iyo Muddada Bilaashka Bilaash ah
Haddii aad doorato inaad joojiso qorshaha martigelinta muddada tijaabada, shirkaddu ma bixiso dammaanad buuxda oo lacag ah?
Waa maxay qorshaha dib u soo celinta shirkadda martigelinta ka dib marka muddada tijaabada lagu dhammeeyo?
Ma jiraan wax lacag ah oo lagaa joojiyo ama khidmad dheeraad ah?
Kuwani waa su'aalo aasaasi ah oo aad u baahan tahay inaad hesho jawaabaha kahor intaadan saxiixin.
Waxaa muhiim ah in la ogaado sida bixiyahaaga martigelinta uu kuugu soo celiyo lacag celinta macaamiisha si aanad u lumin lacag aad u badan haddii ay wax qaldan yihiin.
Waxaa jira qaar ka mid ah shirkadaha martigeliya ee ka masuulka ah lacago badan oo lacag la'aan ah marka ay adeegsadayaashu ka noqdaan xisaabtooda inta lagu jiro xilliyada tijaabada. Taladayada? Ka fogow bixiyayaashan martigelinaya kharash dhan Dhinaca kale, qaar ka mid ah shirkadaha martigelinta ah waxay bixiyaan dammaanad-celin lacageed oo dhan oo aad codsan karto lacag celin lacageed kaddib markii marxaladda tijaabadaadu dhammaato (fiican tahay).
7. Qaababka muhiimka ah ee Web Host
Hubso, waxyaabo qaarkood sida maareynta faylka iyo istaatistikada goobta ayaa had iyo jeer jira, laakiin sidoo kale isha ku hay ftp / sftp, hal guji rakibayaasha, iyo maareynta DNS. Sidoo kale, waa inuu jiraa maamule faylka - hubi inaad adigu tafatiri karto faylka .htaccess halkaas.
Nidaamyada hal-riixa waxay ku yimaadaan dhadhan kala duwan, sida Softalucous or Qoraalka fudud.
Bogga 'SiteGround cPanel dashboard' waa la habeeyay sidaa darteed way fududahay inaad ku shubto barnaamijyada caanka ah sida WordPress, PrestaShop, iyo Joomla.
Si kastaba ha noqotee, ujeedada nuqul hal-riix ah waa inaad noloshaada ka dhigto mid aad u fudud. Kuwani waa noocyada qalabka lagu rakibo ee kaa caawin kara inaad rakibto waxyaabo sida WordPress, Joomla, Drupal, ama martida dalabyada kale ee websaydhka. Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso waa buuxi magacyo qaarkood oo laga yaabo inay tilmaamaan buug ama si aad u socoto.
FTP / Access SFTP
Helitaanka FTP / SFTP waa mid aad u qiimo badan oo ku lug leh xawaalad tiro badan oo faylasha ah. Qaar ka mid ah martigeliyayaashu waxay isku dayaan inay iska tagaan kaliya maamulaha faylka, laakiin taasi inta badan waa mid xadidan.
Helitaanka SSH at InMotion Hosting.
Faylka .htaccess sidoo kale waa mid aad u awood badan waxana uu kaa caawin karaa inaad bedesho isbeddelada maamulka oo dhan. Waxay koontaroolaysaa wax kasta oo laga bilaabo dib u jeedinta illaa iyo helitaanka aqoonsiga sirta ah iyo maaraynta, waxayna noqon doontaa mid muhiim u ah mustaqbalka mustaqbalka.
Haddii aad adigu iska diiwaan galiso martigeliye khaas ah sida WP Engine iyo Pressidium (kuwaas oo diirada saaraya WordPress badiyaa martigelinta), astaamahan asaasiga ahi waa waa in la haystaa. WAXA LA YIHIIN inaad la qabsato adeeg bixiyeyaasha aan bixinin.
Isbarbardhig sifooyinka muhiimka ah ee ay bixiyaan shirkadaha kala duwan ee martigelinaya isticmaalaya Qalabka Isku-darka Isku-dhafka. Halkan waxaa ah isbarbardhigyo caan ah oo la raadsado si aad u bilowdo -
8. Noocyada Ganacsiga e-Ganacsiga
Ma jirtaa websaydhka e-commerce?
Miyaad isticmaashaa barnaamij gaar ah oo gaar ah?
Ma u baahan tahay inaad macaamil ganacsi ku samayso boggaaga?
Ma u baahan tahay taageero farsamo oo gaar ah (ie, hagaha PrestaShop, iwm)?
Haddii ay haa tahay, markaa waa muhiim inaad ka qaadato martigaliye webka leh taageero ku filan e-ganacsi. Shahaadada SSL, IP-ga qoondeeyey, iyo rakibida rakibida mashiinka alaabada iibka ah ayaa ah qaar ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan / taageerooyinka aad u baahan tahay.
Akhri maqaalka Azreen 5 webka ugu fiican ee martigelinaya ganacsiyada yaryar.
9. Guddi kormeer ah oo kumbuyuutar ah oo sahlan
Guddi koontarool leh oo user-friendly leh shaqeyn ballaaran waa mid aad u muhiim ah, tan iyo waa maskaxda ee xisaabta martigelin.
Macno malahan hadii ay tahay cPanel ama Plesk ama xitaa guddi xakameyn dhinac saddexaad ah (sida waxa GoDaddy soo bandhigo), illaa iyo inta ay isticmaaleyso-saaxiibtinimo oo la imaanaysa dhammaan howlaha lagama maarmaanka ah. Iyadoo aan la helin guddi kontaroola oo kugu filan, waxaa lagaa tagi doonaa naxariista shaqaalaha teknolojiyada martigelinta - xitaa haddii waxa kaliya ee aad u baahan tahay ay tahay adeeg aasaasi ah.
Waxaan mar horey ku lahaa xisaab IX Web Hosting, iyo inkasta oo aysan aheyn marti-xumo - IP-yada badan ee loo qoondeeyay qiimo aad u macquul ah, oo lagu daray taageerada tiknoolajiyadda weyn - Waa inaan joojiyo xisaabtaydii sababtoo ah gudigeeda koontadani waxay ahayd mid aad u xun.
Guddi xakameysan oo loo isticmaalo martigeliyeyaasha shabakadaha kala duwan
Fatuuro - -
Iskuduwaha Barashada - -
10. Ka joojinta Xisaabtanka: Waa maxay xaddidaadyada?
Waa tan tilmaanta lacagta oo inta badan bogagga dib u eegista martigelinta aysan kuu sheegi doonin: Shirkadaha martigeliya waxay jiidi doonaan koodka waxayna xayirayaan koontadaada haddii aad u isticmaaleyso awood badan CPU ama aad jebiso xeerarka.
Xaqiiqda marti gelinta aan xadidneyn
Waxaa laga yaabaa inaad ka soo gudubtay ereyga '' Unlimited Hosting '' qaar ka mid ah bixiyeyaasha marti-gelinta websaydhka ee caanka ah. Marti gelinta aan xadidneyn waa buzzword loo adeegsaday bixiyeyaasha martigeliyaasha badan ee la wadaago si loo sharxo awooda ay u leeyihiin gudbinta kaydinta iyo xaddiga xaddidan.
Nasiib darro, xalka ugu fudud martigelinta aad ayay u xadantahay marka aad ka fikirto.
Waa tan waxa, qorshe "Marti gelin aan xadidneyn" ayaa ah "aan xadidneyn" marka aad isticmaaleyso wax ka yar ilaha server ee aad heli karto.
Ka soo horjeedda aaminsanaanta caanka ah, xawaaraha baaxadda leh iyo kaydinta maahan kuwa iyagu u janjeera shirkadaha. Taabadalkeed, waa CPU iyo xusuusta oo lagu soo rogay xad.
Tusaale ahaan, degel leh booqdeyaasha 5,000 maalin kasta ayaa awoodi waaya inay xamili karaan taraafikada haddii ay jirto xaddid xagga awooda xusuusta iyo CPU ah, in kasta oo ay haysato xarig milkiile oo ku filan.
Maaha wax aan caadi ahayn in shirkadaha ay ku daraan xaddidaad ku saabsan isku xirnaanshaha xogta isweydaarsiga ama lambarka wareegga CPU ee koonto ay adeegsan karto, ToS.
Waxay asal ahaan la mid tahay cunnooyinka-waxaad wada-cuni karto, taasina, bixiyaha martigeliyaha wuxuu ku siinayaa inaad marin u hesho “aan xadidneyn” laakiin waxaad kaliya u adeegsan doontaa qadar macquul ah.
Shaydaanka ayaa ku jira faahfaahinta
In kasta oo ay jiraan xaddidyo qorshooyinka "aan xadidneyn", wali waa mid aad u sarreysa. Akhrinta daabacaadda qumman ee Adeegga Shirkadda (ToS) waxay ku siin doontaa qeexitaan cad oo ku saabsan xaddidaadaha ay ku soo rogaan adeegyada marti-gelinta aan xadidnayn. Waxaa laguu sheegi doonaa meel shuruudaha iyo shuruudaha in koontadaada laga joojinayo ama lagaa joojinayo isticmaalka ka-faa'ideysiga kheyraadka - badanaa sida caadiga ah kuu sheegi maayaan inta. Waxa kale oo si cadaalad ah loo hubaa in ku dhawaad ​​DHAMMAAN marti geliyayaasha webka aysan u dulqaadan doonin marti gelinta wixii faylal sharci darro ah iyo / ama adeegyo ah. Markaa hadaad rabto inaad maamusho degel u oggolaanaya dadka inay soo dejistaan ​​feylasha pirated, waxaad u badan tahay inaad nasiib u leedahay qaybta inteeda badan.
Ogaanshaha xaddiga koontadaagu wuxuu kaa caawinayaa inaad fahanto laba shay -
Sidee bay ufilan tahay (ama mecniin) martigaliyayaasha internetka ee liiska ku jira - Miyay tahay inaad la tagto midaan, ama marti kale oo leh xaddidaad xayiraad ah?
Sidee hufnaanta shirkadda martigelinta u tahay - Miyaad kalsooni ku qabtaa ereyada soo socda ee shirkadda martigelisa? Shirkadaha daacadnimada leh ee rasmiga ah waxay caadi ahaan leeyihiin tilmaamo aad u cad oo ku saabsan xaddidaadda xisaabaadka iyo shuruudaha adeegga.
Tusaale: iPage TOS
Tusaale ahaan, waa tan waxa ku qoran iPage's TOS - fiirso weedho hoosta ka xariiqa.
Isticmaalaha ayaa ku raacsan in Isticmaaluhu uusan u isticmaalin qaddarka xad dhaafka ah ee ku-meel-gaarka ah ee ku-meel-gaarka ah ee 'CPU' ee ku saabsan wax kasta oo ka mid ah adeegayaasha 'iPage'. Xad gudub kasta oo ku saabsan siyaasaddan waxay ku dambayn kartaa tallaabo sixitaan ah oo ay sameysay iPage, oo ay kujirto qiimeynta kharashyada dheeriga ah, kala goynta ama joojinta mid kasta iyo dhammaan Adeegyada, ama joojinta heshiiskan, […]
Akhri halkan iPage oo dhamaystiran
11. Saaxiibtinimada Deegaanka
Inaad haysato bogga internetka ee deegaanka ayaa soo dhaweynaya walwalka koowaad ee qaar ka mid ah websaydhka.
Sida laga soo xigtay daraasadaha sayniska, server dhexdhexaad ah oo celcelis ah wuxuu soo saaraa wax ka badan 630 kg of CO2 (taas oo ah wax badan!) iyo cuno 1,000 KWh ee tamarta sanadkiiba. A host host web dhanka kale, teorik ahaan wuxuu soo saaraa eber CO2. Waxaa jira farqi weyn oo u dhaxeeya martigeliyaha webka cagaaran iyo martigeliye aan ku habooneyn.
Haddii aad daryeesho bey'ada oo aad jeceshahay in aad hoos u dhigto calaamadda kaarboonka ee loo yaqaan shirkadaada ama naftaada, ka soo qaado aqalkaaga webka kaas oo ku shaqeeya tamarta dib loo cusboonaysiin karo (ama ugu yaraan, martigaliye websaydh ah oo isku dayaya isticmaalka tamarta iyada oo loo marayo shahaadooyinka cagaaran).
Talo wax ku ool ah: Shirkado badan oo martigeliya ayaa adeegsada “istiraatiijiyadda suuq geynta cagaaran” dhawr sano ka hor laakiin taasi waxay umuuqataa inay waqtigeedu dhammaaday. Iyada oo ku saleysan aragtidayda, Greengeeks waa midda yar ee firfircoon ee cagaarka u socota (ka eeg liiska GreenGeeks 'EPA Liiska Awoodda Korantada Cagaaran).
GreenGeeks waxaa lagu bilaabay 2008. Warbixintii ugu dambaysay ee loo gudbiyay EPA waxay ahayd July 2016 (Ilo).
12. [Email ilaaliyo]
Haddii aad rabto inaad xisaabiso xisaabaadka email-ka ah oo aad la wadaagto boggaaga, waa inaad eegtaa muuqaalada emailka ka hor inta aadan saxiixin. Shirkadaha badidooda badankood waxay la imaan doonaan awoodda ay u leeyihiin inay martigeliyaan emailkaaga (wax la mid ah [Email ilaaliyo]) laakiin hey, marwalba way wanaagsan tahay in la hubiyo oo hubiyo in ay tahay, haa?
Haddii aysan jirin fariimo email ah, ma jirto heshiis weyn. Waxaa jira siyaabo tiro ah oo aad ku yeelan karto koontada emailka ah adigoo isticmaalaya domainkaaga. G Suite, tusaale ahaan, waa adeeg ay bixiso Google taas oo kuu ogolaan doonta inaad leedahay emails u gaar ah, oo marti u ah server-kooda. Wuxuu ka bilaabmaa sida ugu hooseeya $ 5 halkii qofba bishii.
Talooyin faa'iido leh: Baro sida loo martigaliyo emailkaaga oo aad raadsato email ugu fiican martigelinta halkan.
13. Wakhti Buuxa
Ha la yaabin haddii aad aragto qaar ka mid ah martigaliyayaasha websaydka inay ku qasbaan macaamiishooda in ay qaataan qandaraas aan macquul ahayn oo dheer. Lunarpages, tusaale ahaan, waxay bedeleen qaab-dhismeedkooda qiimaha ee June 2009 iyo macaamiisha qafaalan inay qaataan heshiis 5-sano ah martigelinta si ay ugu raaxaystaan ​​heshiis $ 4.95 / mo. Lunarpages ma sii bixiyaan heshiis noocan ah hadda kiiska wuxuu weli u adeegi karaa tusaale ahaan.
Haddii aad ku qanacdo heshiisyada muddada dheer ee soo socda? Jawaabkeenu waa maya - Marna ha ku qorin martida webka muddo kasta oo ka badan laba sano oo soconaya, haddii aanay bixin caddayn waqti kasta lacag dammaanad qaad ah.
Talooyin faa'iido leh: Shirkadaha xayeysiinta badanaa waxay bixiyaan dalabyo dheeraad ah marka ay isticmaalayaashu u tagaan muddooyinka rikoodhada dheer. Kharashka waa weyn yahay; laakiin waxaan si xoog leh kugula talineynaa dadka isticmaala in aysan horay u bixinin wax ka badan sanado 2. Tiknoolajiyadu si dhakhso ah ayey u kobceysaa waxaana laga yaabaa inaad u baahantahay baahidaada si aad u kala duwan waqti gaaban.
14. Dib uhabaynta goobta
Kumbuyuutarrada burburay, qalabku way ku guuldareystaan, kuwani waa xaqiiqooyinka nolosha sida xitaa dhimashada iyo canshuurtu waa. Boggagaaga ayaa sidoo kale noqon doona mid nugul waxyaabahan, ama laga yaabo in hacker uu galay boggaaga WordPress-gaaga iyo bedelay faylkaaga index.php. Waxaa laga yaabaa in xogtaada oo idil laga helay.
Haddii martigeliyahaaga webkaagu uu si joogto ah u sameysto bogga, ma jiro wax laga walwalo marka dhacdooyinkan ay dhacaan. Bixiyehaaga martigelinaya waa inuu awood u leeyahay inuu dib u soo celiyo goobtaada oo dhan marnaba dhammaantood (ama ugu yaraan, qadar weyn).
On backups, halkan waa su'aalo muhiim ah dhowr ah si aad u weydiiso martigeliyahaaga web:
Miyuu webkaagu yahay mid si joogta ah u bixiya nuqullo buuxa?
Goobta goobta ayaa lagu samayn karaa gacanta iyada oo loo marayo guddiga kormeerka?
Miyaad abuuri kartaa kumbuyuutarrada baabuurta ee cusub si sahlan iyadoo loo marayo shaqooyinka mashaqada ama barnaamijyada kale?
Miyaad si fudud u soo celin kartaa faylashaada kaydka si aanad u sugin shaqaalaha taageerada inay kuu sameeyaan inta lagu jiro mudada galka xasiloonida?
Talooyin faa'iido leh: Goobaha internetka oo leh tas-hiilaad faa iidaysan oo lacag la'aan ah - A2 Hosting (qorshooyinka Swift iyo kor), Joogitaanka Webka (loogu talagalay qorshayaasha dheeraadka ah iyo kor), TMD Hosting, Soo dhaweynta, Iyo SiteGround.
15. Taageero Soodhaw ama Taageero Telefoon
Shakhsi ahaan waxaan u doorbidayaa in lagu sheekeysto telefishanka iyo shirkadaha websaydhka leh dukumiintiyo dhamaystiran (si aan u akhriyo oo aan u xalliyo dhibaatooyinka naftayda).
Laakiin taasi waa aniga kaliya. Waxaad doorbidi kartaa email ama taleefan taageero halkii.
Ugu dambeyntii, waxaan rabnaa qof nagu soo tuura kara nafta badbaadiyaha nolosha isla markiiba markaan ku cadaadno badhanka SOS.
waan isku dayay Shirkadaha martigelinta ee 28 martigelinta wada sheekaysiga tooska ah sanadka 2017 - SiteGround, InMotion Hosting, Web Host Face, WP Engine, iyo Go Get Space ayaa u taagnaa sidii guuleystaha tijaabadan.
Screenshots oo ka mid ah rikoodhada aan ku noolahay webhostka. Codsigeyga codsigeyga ayaa laga jawaabay dhowr ilbiriqsi, waxaana su'aalahayga laga jawaabay si xirfad leh. Dhibaatada guud ee shaqaalaha taageera martigaliyaha webka wuxuu ahaa mid aad u fiican. Akhri faahfaahintayda faahfaahinta ee WebHostFace.
SiteGround - Nidaamka taageerada wada sheekaysiga ee cabsida leh iyo shaqaalaha taageerada caawinta leh oo aad u wanaagsan. Khibrad aad u wanaagsan guud ahaan. Akhri faahfaahinta faahfaahinta bogga Goobta
16. Jawaabta Server-ka / Xawaaraha Bogagga Websaydhka
Ma dhahayo haddii shirkadaada martigelinta ay si dhakhso ah uga jawaabeyso ama aanad! Mas'uuliyad waa qiyaas ah waqtiga uu ka qaato marka qof ku dhufto magacaaga domain ilaa uu ka qirsan yahay codsigan.
Inta badan loo yaqaan "Time to First Byte" (TTFB), xawaaraha jawaabta ee server-kaagu wuxuu ka badan yahay kan is-raaca adigoo haysta bogga ugu dhakhsaha badan. Waxaa la diiwaangeliyey in muddada dheer ee uu qofku sugayo websaydh uu ku dhajiyo, waxay u badan tahay inay ka tegi doonaan goobta ka hor intaysan xitaa dhicin loading.
Xawaaraha boggaaga ayaa sidoo kale saameynaya sida Google iyo makiinadaha kale ee raadinta ay kugula socdaan natiijooyinka raadinta.
Tani waa dhif in wax shuruud ah in shirkada martigelinta ee internetka ay kuu sheegi doonto. Hal tilmaam caadi ah badiyaa waa qiimo. Qalabka korontada iyo qalabka korontada maaha mid raqiis ah. Haddii martidaada ay awoodi karaan inay lacag kugu soo dalacaan $ 2 bishiiba si ay u marti geliyaan, waxyaaluhu waxay helayaan kalluun yar.
Imtixaanka xawaaraha BlueHost ee dhawaanta - goobta tijaabada ayaa soo noqotey markii ugu horeysay 488ms. Akhri faahfaahinta dib u eegida BlueHost.
Talo waxtar leh: Isticmaal qalab sida sida Byte Check, Bitcatcha, Iyo Baaritaanka Webka si aad u tijaabiso xawaaraha boggaaga.
Duubista: Boggo kastaa Waxay Leedahay Baahiyo Kala Duwan
Arrinku waa - "ugu fiican" had iyo jeer waa erey qaraabo ah. Marna ma jiro xal go’an oo loo qabo baahiyaha martigelinta websaydhka.
Anigu kuma talin lahaa a martida internetka oo bilaash ah haddii aad bilawday website-ka weyn ee e-commerce. Xaqiiqdii waan ku talin lahaa qaali qaali ah oo lagu martigeliyay WordPress hadaad socodsiineyso bog yar oo hiwaayad ah.
Degmooyin kala duwan ayaa leh baahiyo kaladuwan. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa bixiyaha adeegga saxda ah ee martigeliso bartaada internetka.
Ma ahan sidii loo heli lahaa martigeliyaha ugu fiican ee adduunka; halkii, waxay ku saabsan tahay helitaanka martida websaydhka ee SAF.
Halkaasna, waad ku haysataa - hagaha dukaameysi ee martigeliyaha webka. Waxaan rajeynayaa inay yareyn doonto howsha xulashadaada martigelinta waxyar. Markaad diyaarsato martigelintaada, waa waqtigii la abuuri lahaa oo lagu dhigi lahaa boggaaga internetka!
Ku laabo liiska xulashada xulashada martigeliyaha websaydhka
Sidee Dib-u-eegistayada Marti-gelintayadu u Shaqaysaa?
Waxaan isticmaalnaa liiska hubinta qiimeynta 80-dhibcaha si loo qiimeeyo martigeliyaha webka.
Halkan guji si aad wax uga ogaato sida aan u qiimeyn karno websaydhka websaydhka ah.
Hagaha iibsiga Websaydhada badan
Marti-geliyaha shabakadda ugu wanaagsan: 10-ka ugu xulan ee aan dooranay
Adeegyada Marti-gelinta ah ee ugu Weyn ee Suuqa
Waxqabadka Degdegga ah ee Degdegga ah ee Degdegga ah
Marti gelinta Ganacsi ee ugu Fiican
Marti gelinta ugu Fiican Qorayaasha
Marti gelinta ugu Fiican Websaydhada Shaqsiyadeed
Jadwalka Dib u eegista Websaydhka
Liiska hubinta xulashada martigeliyaha websaydh
1- Ogow baahiyahaaga martigelinta
2- Hubso isku halleeynta serverka
3- Ikhtiyaarada casriyeynta martigelinta
4- Lambarada qaybta addon
5- Qiimaha isqorista iyo qiimaha dib u cusbooneysiinta
6- Nidaamka lacag celinta iyo muddada tijaabada bilaashka ah
7- Astaamaha martigalinta muhiimka ah
8- astaamaha ganacsiga iyo taageerada
9- Gudiga xakameynta martigelinta
10- Xaddidida Akoonka
11- Saaxiibtinimada deegaanka
12- Marti-gelinta emaylka ([Email ilaaliyo])
13- Mudada Isdiiwaangalinta
14- Badbaadinta goobta
15- Taakuleynta tooska ah / talefoonka
16- Jawaabta Server
Secret Secretariatka Hore
WebHostingSecretRevealed (WHSR) waxay daabacdaa maqaallo waxayna u soo saartaa qalab adeegsadayaasha ka caawiya martigalinta iyo dhisida degel.
About . Erey . Translate . Afeef
Us raac: Facebook . Twitter
Rugta ay ku shaqeeyaan
Sidoo kale Goobahayaga: HostScore . Dhis
Qalabka Websaydhka & Talooyin
Website-yada ugu wanaagsan ee ku shaqeeya ganacsiga yaryar
Plesk vs cPanel: Isbarbar dhig Boonada Maareynta Marti-gelinta
Xaqiiqda Ku Saabsan Xayiraadda Unlimited
Bog internet Wix / Weebly
Bakhaar Bakhaar: BigCommerce / Soo iibso
Ma yihiin sharciyo VPNs? Wadamada Mamnuucay Adeegsiga VPN
Sida loo dejiyo VPN: Hagaha-socodka
Sida loo Qariyo ama loo beddelo Cinwaankaaga IP-ga?
Faallooyinka VPN: ExpressVPN / NordVPN / Surfshark / CyberGhost / TorGuard
Maqaallada caanka ah (2020)
Immisa Martigelin Bandwidth ah oo aad u Baahan Tahay?
Sida Loo Helo Webka Dark iyadoo la isticmaalayo TOR Browser
Sida loo bilaabo iyo u bilow Web Site Forum
Sida Loogu Dhaqdhaqaaqo Degelkaaga Websaydh Kale
Liisaska Weyn ee Fikradaha Ganacsi ee Ganacsiga ah si aad ku bilowdo
La soo dejiyey dhowaan
Chaturbate iyo 10 Websaydhyo Kale oo Lagu Dhistay-Django
10 Beddelka ka rakhi ah oo loogu talagalay SiteGround Hosting
Bogagga Websaydhada ugu Weyn ee Bilaashka ah (2020)